Ihe eji achọ mma ịchọ mma - JUAN JUAN
Juan Juan ịchọ mma na-ehichapụ nwere ezigbo aha ịbụ ụlọ ọrụ OEM maka ụdị ama ama n'ụwa na ụlọ ọrụ ịchọ mma. Jiri nlezianya mara na nhicha ịchọ mma bụ isi ihe na - akpata ndị na - eri ọ bụla na ụdị anụ ahụ. Dịka ahịa siri ike ma na-agbanwe agbanwe mgbe niile, anyị nwere obi ụtọ na anyị mepụtara ezigbo mma nke nhichaa ịchọ mma dabere na usoro ndị ahịa na teknụzụ ọhụrụ.
Anyị na-agbasi mbọ ike maka mmelite ngwaahịa iji hụ na a na-edebe ndị isi anyị n'ihu egwuregwu.
Ndị isi anyị na-azụlite ihe ịchọ mma ịchọ mma na-ehichapụ mkpocha akwara, na-ehichapụ ya na usoro a kapịrị ọnụ maka akpụkpọ anụ yana mmanya na-aba n'anya, njikwa mmanụ na ụdị mgbanwe dị iche iche gụnyere àgwà ndị a:
Njikwa mmanu na itule
Iji jide n'aka na mma kacha mma nke ihe ịchọ mma na-ehichapụ
50 Ctsa mpịakọta
Nke gara aga: Ehichapụ Ezinaụlọ
Osote: Nwa na-ehicha